သတင်းမှန် တွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီမနားတင်ပေးနေတဲ့ သူမကို မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ ပြောဆိုနေတဲ့သူအား ထိထိမိမိတုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ဟန်နာယူရီ – Cele Oscar
သတင်းမှန် တွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီမနားတင်ပေးနေတဲ့ သူမကို မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ ပြောဆိုနေတဲ့သူအား ထိထိမိမိတုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ဟန်နာယူရီ
ပရိတျသတျကွီးရေ…. Make-Up Artist တဈယောကျ ဖွဈတဲ့ရပျတညျနတေဲ့ ဟနျနာယူရီ ဟာဆိုရငျ ပရိတျသတျတှရေဲ့ခဈြခငျအားပေးမှုကိုအပွညျ့အဝရရှိထားတာပဲဖွဟျပါတယျနျော.။သူမကတော့ ကိုယျပိုငျ စီပှားရေးလုပျငနျးတှကေို လုပျကိုငျ နရေုံသားမကပဲ ကွျောငွာမငျးသမီးတဈယောကျအဖွဈနဲ့ပါ ရပျတညျနတေဲ့သူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ဟနျနာယူရီဟာဆိုရငျ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့နိုငျငံရေး အခွအေနေ နဲ့ပတျသကျပွီး ပွညျသူလူထုနဲ့အတူ တဈသားတညျးရပျတညျခဲ့တဲ့သူတဈယောကျဖွဈတဲ့အပွငျ အခကျအခဲ ဖွဟျနတေဲ့ ပွညျသူ တှကေိုလညျး သူမ တတျနိုငျ သလောကျကူညီထောကျပံ့ပေးနတောကိုလညျးမွငျတှရေ့ပါတယျ။
သူမဟာဆိုရငျ ဖဖေျောဝါရီ လမှစတငျပွီးယနအေ့ခြိနျထိ ဘာဝငျငှမှေမရှိတော့ပဲအပျထားတဲ့အလုပျတှေ အခြိနျမီမပွီးနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ လုပျငနျးရှငျတှကေိုတောငျ ငှပွေနျလြျောရတဲ့အခွအေနထေိဖွဈလာခဲ့တဲ့ မျောဒယျ ဟနျနာယူရီဟာ အမှနျတရားရဲ့ ဘကျတျောသား စဈစဈဖွဈပွီး နိုငျငံ့အရေးနဲ့ပတျသကျတဲ့ သတငျးအမှနျတှကေို သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျကနတေဆငျ့ တဈကမ်ဘာလုံး သိစဖေို့အတှကျ ကွိုးစားပေးနခေဲ့ပါ တယျ။ ကိုယျတိုငျဝငျငှမေရှိပမေယျ့လညျး ဒီကိစ်စကိုအရေးမထားဘဲ တိုငျးပွညျအရေးအတှကျသာ တတျနိုငျတဲ့ဖကျကကွိုးစားပွီး အခြိနျပွညျ့ သတငျးမှနျတှေ ဝမြှေပေး နသေူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာ ကဆြုံးသှားတဲ့သူရဲကောငျးတှရေဲ့ စာရငျးအမှနျကို တငျပွရာမှာတော့ မလိုသူတဈယောကျက ” Media ပေါငျးစုံက (၂၀၀) ကြျောပဲကွငွောတာပါ ညီမကဒျေါလာဘယျလောကျရလို့ သောကျတလှဲ ပွောရတာလဲ ” ဆိုပွီး လာရောကျ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို ပွောဆိုခဲ့သူကိုတော့ သူမက ” သတငျးတှတေငျနတော ဒျေါလာစားနရေလို့တဲ့ကှယျ ပေးတဲ့ ဆုနဲ့ပွညျ့ပါစေ ရှလြေှ့ောကျ Korea မှာ thai မှာ ဒျေါလာတှနေဲ့ပဲ အလုပျတှေ လကျခံရပါစေ ” ဟုဆိုကာ ပွနျလညျတုနျ့ပွနျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော။
အမှနျတရားအတှကျ ကွိုးစား နခြေိနျမှာ ဒီလိုတိုကျခိုကျ မှုတှကေတော့ ကွုံရစမွဲပါ။ဒီနောကျ မှာလညျး သူမရဲ့လကျရှိအခွအေနကေို ” February (1) ထဲက ငါးကပျြတောငျ ဝငျငှမေရှိဘူး တှေးရငျးဝမျးနညျးကိုယျ့ ဘဝကိုယျကိုတောငျ။ ခုလိုဒျေါလာ တှရေတယျ ဒျေါလာစားဆိုတဲ့ စကားမှနျပါစေ အနာဂတျမှာဒျေါလာတှနေဲ့ အလုပျလေးတှလေုပျခှငျ့ရပါစေ 😇 ” ဆိုပွီး ခပျနောကျ နောကျလေး ပွောခဲ့ပါသေးတယျ။ ဖတျရှုပေးတဲ့ပရိတျသတျကွီးကို ကြေးဇူအထူးပဲတငျရှိပါတယျ။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. Make-Up Artist တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ ဟန်နာယူရီ ဟာဆိုရင် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတာပဲဖြဟ်ပါတယ်နော်.။သူမကတော့ ကိုယ်ပိုင် စီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင် နေရုံသားမကပဲ ကြော်ငြာမင်းသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ပါ ရပ်တည်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟန်နာယူရီဟာဆိုရင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် အခက်အခဲ ဖြဟ်နေတဲ့ ပြည်သူ တွေကိုလည်း သူမ တတ်နိုင် သလောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။
သူမဟာဆိုရင် ဖေဖော်ဝါရီ လမှစတင်ပြီးယနေ့အချိန်ထိ ဘာဝင်ငွေမှမရှိတော့ပဲအပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေ အချိန်မီမပြီးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတောင် ငွေပြန်လျော်ရတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်လာခဲ့တဲ့ မော်ဒယ် ဟန်နာယူရီဟာ အမှန်တရားရဲ့ ဘက်တော်သား စစ်စစ်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ့အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအမှန်တွေကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ကနေတဆင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး သိစေဖို့အတွက် ကြိုးစားပေးနေခဲ့ပါ တယ်။ ကိုယ်တိုင်ဝင်ငွေမရှိပေမယ့်လည်း ဒီကိစ္စကိုအရေးမထားဘဲ တိုင်းပြည်အရေးအတွက်သာ တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကကြိုးစားပြီး အချိန်ပြည့် သတင်းမှန်တွေ ဝေမျှပေး နေသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ စာရင်းအမှန်ကို တင်ပြရာမှာတော့ မလိုသူတစ်ယောက်က ” Media ပေါင်းစုံက (၂၀၀) ကျော်ပဲကြေငြာတာပါ ညီမကဒေါ်လာဘယ်လောက်ရလို့ သောက်တလွဲ ပြောရတာလဲ ” ဆိုပြီး လာရောက် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ပြောဆိုခဲ့သူကိုတော့ သူမက ” သတင်းတွေတင်နေတာ ဒေါ်လာစားနေရလို့တဲ့ကွယ် ပေးတဲ့ ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ ရှေ့လျှောက် Korea မှာ thai မှာ ဒေါ်လာတွေနဲ့ပဲ အလုပ်တွေ လက်ခံရပါစေ ” ဟုဆိုကာ ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
အမှန်တရားအတွက် ကြိုးစား နေချိန်မှာ ဒီလိုတိုက်ခိုက် မှုတွေကတော့ ကြုံရစမြဲပါ။ဒီနောက် မှာလည်း သူမရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကို ” February (1) ထဲက ငါးကျပ်တောင် ဝင်ငွေမရှိဘူး တွေးရင်းဝမ်းနည်းကိုယ့် ဘဝကိုယ်ကိုတောင်။ ခုလိုဒေါ်လာ တွေရတယ် ဒေါ်လာစားဆိုတဲ့ စကားမှန်ပါစေ အနာဂတ်မှာဒေါ်လာတွေနဲ့ အလုပ်လေးတွေလုပ်ခွင့်ရပါစေ 😇 ” ဆိုပြီး ခပ်နောက် နောက်လေး ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးကို ကျေးဇူအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။